Musharixiinta Madaxweynaha oo War kasoo saaray qaraxa Muqdisho - Awdinle Online
Musharixiinta Madaxweynaha oo War kasoo saaray qaraxa Muqdisho
Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay Qaraxii maqaayadda Gelato Divino oo lagu dilay dhalinyaro Soomaaliyeed .
Qaar ka mid ah Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay in ay ku fashilantay sugitaanka Amniga caasimada, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay mi doobaan.
Gudoomiyaha golaha Musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay laamaha Ammaanka dowladda Soomaaliya in ay laba jiraan howlahooda sugitaanka Ammaanka.
“Waxaan cambaareynayaa falkii foosha xumaa ee argagixisadu ku weerareen maqaayadda Gelato Divino ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku geeriyoodeen dhalinyaro mustaqbalka dalkeenna muhiim u ahaa. Waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qoysaska Marxuumiinta naga baxay Allaha u naxariistee, anigoo dhaawacyadana Alle uga rajeynayo caafimaad degdeg ah., Ugu dambeyntii waxaan ku boorinaynaa Hay’adaha Amniga ee Dowladda inay labalaabaan dadaalkooda ku aadan sugidda amniga, anigoo ugu baaqaya ineysan ka weecan, kana mashquulin howshii loo igmaday ee sugidda amniga, si gaar ah xilliga kala guurka” ayuu ku yiri Shariif Qoraal uu soo saaray.
Daahir Maxamuud Geelle hoggaamiyaha xisbiga dan Qaran ayaa sheegay in ay tahay wax laga xumaado in dhalinyarada la dilo, waxaana uu sidoo kale tacsi u diray ehelada dadkii ay waxyeelado soo gaartay.
“Waxaan canbaaraynayaa falka foosha xun ee lugu xasuuqay dhallinyarada aan waxba galabsan, luguna fasahaadiyay maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed, Ehelada iyo qaraabada ay ka bexeen dadkii ku geeriyooday qaraxa ka dhacay wadada airport-ka Muqdisho Maqaayadda Gelato Divin ayaan si gaar ah tacsi ugu diraynaa lana wadaagayaa murugada, Dhallinyarada aqoonyahanka ah ee lugu laayay falkaal waxay ahaayeen labeentii bulshada, wuxuuna ka dhigan tahay isku day bulshada indhaha looga tuurayo” ayuu yiri Daahir Geelle.
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in weerarkaasi lagu dilay dhalinyaro lahaa Mustaqbal wanaagsan ayna tahay wax laga xumaado.
“Waxaan si xoogan u canbaaraynayaa weerarkii argagexiso ee lagu qaaday maqaayada Gelato Divino. Waxaa caawa goobtaas ku go’ay dhalinyaro uu hiigsi nolol iyo mustaqbal yididiilo leh ka hor muuqdo, kuuwaasoo doonayey in ay dalkooda iyo dadkooda dhisaan. Dhamaantood Allaha u naxariisto. Tani waa fariin ay argagexisadu dirayaan, oo ay leeyihiin goob kasta ayaan beegsan karnaa” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Previous articleDowladda oo ka hadashay qarixii ka dhacay Muqdisho
Next articleWafdi ka socda Mareykanka oo booqasho qarsoodi ah ku tegay Muqdisho